Maanhadal & Maanta iyo Abuukar Arman: Shirka London Muxuu Yahay, Muxuu se kaga Duwanyahay Kuwii Hore? – Radio Daljir
Maajo 13, 2017 1:34 b 2
Barnaamijka MAANHADAL ee Maanta oo Jimce ah, saacaddu marka ay tahay 1:07 PM waxaa marti u ah dibloomaasi, aqoonyahan, iyo khabiir siyaasadeed Abuukar Arman. Abuukar waxa uu si qoto dheer uga faalloon doono shirka London, kii ka horreeyey ee isla London, kii Brussels, damaca iyo siyaasadda dawladaha adduunka ee ku aaddan Soomaaliya, liidashada siyaasiyiinta iyo hugaamiyayaasha Soomaalida, deymaha Soomaaliya lagu leeyahay, kuwii Madaxweyne Xasan Shiikh ku sii daray, kuwa la galin doono shirka London kabacdi, yabooha lacagaha, meelaha ay ka yimaadaan, meesha lagu xisaabiyo, sida loo xisaabiyo, danta laga leeyahay, iyo meesha ay aaday $50 billion oo Soomaaliya loogu deeqay ama la deymiyey 1991 illaa 2011 (20 sano oo sannad walba ahayd $2.5 billion). Maxaa lagu qabtay lacagtaas $50ka bilyan ah, xaggee se aadday oo maanta la arki karo, lana taaban karo, maxaa se looga danlahaa bixintooda?
Intaas kaliya ma aha e Abuukar wuxuu falaanqayn doonaa shirkadda cirka-soo-dhaca ah ee Soma Gas & Oil. Yaa leh, xaggee ka diiwaangashantahay, goormaa la diiwaangaliyey, waa se maxay damaceeda Soomaaliya, sidee se loo aasaasay, Soomalidu se ma ogayd markii indhahooda oo shan lagu hor dhidbay, aysan se ogayn ama aqoon u lahayn waxa socda? Aawaye buu Abukar na weydiin doonaa hay’adihii Soomaaliyeed ee la rabay in ay xisaabahaas u hayaan si asluubaysan oo hadana xirfadaysan?
Abukar wuxuu isweydiin doonaa “maanta maxay shalay kaga duwantahay, shalay se maxaa dhacay, maxaa se la hayaa oo maanta ka diiwaangashan xafiisyada dawladda Soomaaliya?”
Abuukar wuxuu falaanqayn doono macnaha “beesha caalamka” iyo “indhasarcaadka” la indhasarcaadiyo madaxda Soomaalida.
Waxaa kale oo uu Abuukar falaanqayn doona awoodda Baarlamaanka Soomaaliya iyo waxa la gudboon, iyo in Baarlamaanku maanta yahay rajada kaliya ee ay Soomaali ku tashanayso.
Ka bogo oo ha moogaan barnaamijka Maanhadal, Maanta iyo Abuukar Arman. Waxaa daadihin doona Jamaal Faarax Aadan, Daljir Gaalkacyo.
Hoos ka akhri qoraalkii ugu danbeeyey ee Abuukar Armaan: Damaashaadka Hilbaysiga & Feenashada Soomaaliya ee London
Qormooyinka Daljir 54 Siyaasadda & Dhaqaalaha 499 Wararka 25322
Cali Saleebaan Cali Bulxan 4 years ago
shirka london waa mid lagu wiiqayo ciidanka soomaaliya